अन्डा कति खाने ? कसरी खाने ?
जेठ १९, २०७५| प्रकाशित २३:४७
अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर एकदिनमा कति अण्डा खानुपर्छ र पकाउने सही तरिका के हो भन्नेबारेमा तपाईंलाई थाहा छ ? या धेरै अण्डाले हानी गर्न सक्छ ?
चिकित्सकहरु पोषक तत्वले भरपूर भएकाले खानामा अण्डा सामेल गर्न सल्लाह दिन्छन् । यो भिटामिन ए, बी, डी र बी १२ का अलावा लुटीन र जीएजेन्थिनजस्ता पोषक तत्वले भरपूर हुन्छ । आँखाका लागि पनि अण्डा सेवन उपयोगी मानिन्छ । बेलायतका डाइटिसियन डा. फ्र्यांकी फिलिप्सका अनुसार एक दिनमा एक या दुइ अण्डामात्र खान सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘धेरै अण्डा खाँदा डराउनुपर्दैन । तर के ध्यान दिनुस् भने कुनै पनि खानेकुरा बढी खानु भनेको अरु खानेकुुराबाट प्राप्त हुने पोषकतत्वबाट वन्चित रहनु हो ।’
यहीकारण डाइटिसियनहरु सन्तुलित भोजनमा ध्यान दिन्छन् ।
चिकित्सकका अनुसार दैनिक भोजनमा अन्य खालका प्रोटीन पनि हुन्छन् । खानामा आवश्यकभन्दा दुई या तीन गुणा बढी प्रोटीनको उपभोगले मिर्गौलामा खराब असर गर्ने डर हुन्छ ।
अण्डामा कोलेस्टेरोल हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएपछि ब्रिटिश हार्ट फाउण्डेसनले सन् २००७ मा हप्तामा तीनवटा अण्डामात्र खाने सल्लाह दिएको थियो । नेशनल हेल्थ सर्भिसका अनुसार अण्डामा केही कोलेस्टेरोल त हुन्छ तर हाम्रो रगतमा पाइने कोलेस्टेरोलभन्दा कम हुन्छ । अर्को हिसाबले भन्ने हो भने अण्डामा पाइने कोलेस्टेरोल ठूलो समस्या होइन । स्याचुरेटेड फ्याट बनेको कोलेस्टेरोलचाहिँ ठूलो समस्या हो ।
मुटुसम्बन्धी बेलायती संस्थाका अनुसार एउटा अण्डामा ४.६ ग्राम अर्थात् एक चम्चा बोसो हुन्छ । तर यसको एक चौथाई भागमात्र स्याचुरेटेड हुन्छ । यसको मतलब अण्डाकै कारण शरीरको कोलेस्टेरोलमा ठूलो असर पर्दैन भन्ने हो । तर अण्डासँग मख्खन या क्रिम खानाले अर्को नतिजा निस्कन्छ ।
बेलायतका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एडिविना कुरील सन् १९८८ को डिसेम्बरमा बेलायतमा उत्पादन भएका अधिकांश अण्डामा साल्मोनेला ब्याक्टेरिया हुने बताएकी थिइन् । यो ब्याक्टेरिया स्वास्थ्यका लागि खतरनाक मानिन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको यो भनाईपछि त्यतिबेला बेलायतमा निकै हलचल मच्चिएको थियो । केहीसमयपछि एडविनाले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । तर साल्मोनेलाको मामलामा बेलायतको अण्डा आजकाल विश्वकै सुरक्षित मानिन्छ । बेलायती बजारमा पाइने अण्डामा लायन चिन्ह छ भने त्यसको अर्थ कुखुरालाई साल्मोनेलाबाट बच्ने इन्जेक्सन दिइसकिएको छ । गतवर्ष यो अण्डा गर्भवती र बच्चाका लागि सुरक्षित रहेको घोषणा गरिएको थियो ।
विशेषज्ञ भन्छन्, ‘अण्डामा खतरनाक ब्याक्टेरियाको खतरा निकै कम हुन्छ, यसैले यसको सेवनका लागि डराउनुपर्ने कारण छैन ।’
डाइटिसियनका अनुसार अण्डा खानुछ भने सादा तरिकाले उमालेर खानुपर्छ । अमलेट बनाइएको या फ्राइ गरिएको अण्डामा कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्छ ।
यदि अण्डाको बोक्रा चर्किएको छ भने त्यस्तो अण्डा किन्नुहुँदैंन । किनभने त्यसमा ब्याक्टेरिया हुने खतरा हुन्छ । यसलाई फ्रिजमा ढाकेर राख्नुपर्छ । अण्डाको सेतो भागलाइ डब्बामा राखेर तीन हप्तासम्म फ्रिजमा राख्न सकिन्छ भने पहेंलो भागलाई तीन दिनसम्म राख्न सकिन्छ ।
ताजा हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने ?
अण्डा ताजा हो कि होइन भन्ने जान्न एउटा कचौरामा चिसो पानी लिनुपर्छ । त्यसमा अण्डा हाल्नुपर्छ । यदि अण्डा डुब्छ भने त्यो ताजा हो, डुब्दैन भने त्यो ताजा होइन । कुखुराले अण्डा पारेको दिनदेखि २८ दिनसम्म खान योग्य हुन्छ ।
केही व्यक्तिलाई अण्डाको एलर्जी हुन्छ खासगरी ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई यस्तो समस्या हुन्छ । अण्डाका एलर्जीका केही लक्षण :
मुख वरिपरी रातो हुनु या सुन्निनु
यसको एलर्जी ज्यान लिने खालको हुँदैंन । तर एलर्जी भए तत्काल डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ ।
डा फिलिप्स भन्छन्, ‘एलर्जी नभएका व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारले अण्डा खान सक्छन् । तर अण्डा कसरी बनाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
pawan raj paudel .j
Nepalma swasth anda kasari bajarma pugdachha janna iksha chha.yo jankarikalagi dhanyabad.
मधुमेहका ८ लक्षण र बच्ने ८ उपाय
के हो थाइराइड परीक्षण, कसले गराउने ?
निन्द्रा नपुग्दा के हुन्छ ?
पुरुषलाई दुःख दिने प्रोस्टेट बढ्नुका कारण
डिप्रेसनका १४ लक्षण
मिर्गौला फेल हुने ९ कारण र ८ लक्षण
मूत्रप्रणालीमा दसैं खानपानको असर : के गर्ने, के नगर्ने?
विश्वविजेता फ्रान्सले जर्मनीलाई हरायो, ग्रिजम्यानले गरे २ गोल
अर्जेन्टिनामाथि ब्राजिलको रोमाञ्चक जित
कसरी मनाइरहेका छन् युवा नेताले दसैं?
भारतबाट बोका ल्याउनेसँग रकम असुल्दै प्रहरी
१८ वर्षदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ
नेपालगञ्ज एयरपाेर्टमा अलपत्र यात्रु भन्छन्– टिकट जति मन्त्री र सांसदको पावरमा बाँडियाे, सर्वसाधारणकाे बिचल्ली पारियाे
नेविसंघको सभापतिमा ४ महिला नेतृको दावी
दसैं बिदामा पनि बैंक खुला रहने, कुन बैंकको शाखा कहिले खुल्छ?
अन्नपूर्णसहित ३ संरक्षित क्षेत्रमा जाने पर्यटककाे प्रवेश शूल्कमा भारी वृद्धि
दसैंमा टेलिकमको अफरैअफर, तीन महिनाका लागि २२ अफर
इपियस प्रणाली खारेज गरी डब्लुपिएस लागू गर्न माग गर्दै सिओलमा प्रदर्शन
सक्रिय हुँदै अख्तियार, असोज महिनामै पप्पुदेखि बौद्धका डिएसपीसम्म फन्दामा
फूलपाती सहितको डोली हनुमानढोका दरबार पठाइयो